को चालकहरुको लागि जाडो टायर छनौट कहिलेकाहीं एक मुश्किल कार्य हो। र कुनै आश्चर्य कसरी बजेट र उच्चतम bidder गर्न धेरै विकल्प, त्यहाँ कारण। तर यो उच्च लागत उच्च गुणस्तर, र विपरित सधैं होइन। यो मामला मा गलत छैन? तिनीहरूले आफ्नै समीक्षा लेख्न जब चालक, भन्न के मा निर्माता द्वारा प्रदान र आधारित रूपमा जानकारी एक विस्तृत विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ। Amtel Nordmaster हाम्रो आजको परीक्षण विषय हुनेछ। हामी आफ्नो कार लागि टायर किन्न चाहे निर्धारण गर्न उपलब्ध जानकारी को आधारमा प्रयास गर्नेछ, र जसलाई यो सबै भन्दा राम्रो फिट थियो।
टायर को उद्देश्य दायरा
शीर्षक Amtel Nordmaster ST देखि पहिले नै प्रस्ट रूपमा, यो टायर वर्ष को जाडो समयमा प्रयोग हुने। निर्माता अनुसार, यो कठोर रूसी हिउँदमा सुरक्षित ड्राइभिङ सुनिश्चित गर्न सक्छन् कि सबै आवश्यक सुविधाहरू छ। जो यस रबर ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ मौसम, सम्बन्धित समस्या सूची बरफ, आइस्ड डामर वा माटो, भिजेको फुटपाथ र हिउँ porridge छन्। सिद्धान्त मा, त्यहाँ घरेलु यातायात सामना गर्यो सबै मौसम अवस्था सूचीबद्ध छन्। यो टायर तिनीहरूलाई र भइरहेको छ के कसरी सामना गर्न सक्छौं सिक्न मात्र रहनेछ।
विशेष रबर संरचना
जाडो टायर को डिजाइन मा निर्माताहरु द्वारा सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या रबर मिश्रित सन्तुलित संरचना छ। सिलिका टायर Amtel Nordmaster2कारण यो क्षति निकै नरम र उजागर हुन, एक अपेक्षाकृत उच्च तापमान यस्तो स्थिरता हुनुपर्छ। तथापि, यो धेरै adversely को चिप्लो सडक सतह गर्न युग्मन असर छ रूपमा, एकदम कम तापमान मा dubet हुँदैन।
यो निर्माता अनुसार, यो, रबर मिश्रित को अद्यावधिक सूत्रमा धन्यवाद सफाया गरिएको छ पेटेंट र नयाँ वस्तुहरू टायर सिर्जना गर्न विकास, यी समस्या छ। रबर पर्याप्त कोमलता छ र शून्य माथि तापमान मा सर्छ। सिलिका Amtel Nordmaster R14 एक सिलिकन oxidant पहिले लगाउन प्रतिरोध लागि जिम्मेवार मार्फत बलियो आणविक संरचना प्राप्त भयो। यो सबै हामीलाई गुणस्तर उत्पादन घरेलू जाडो सडक सामना गर्न सक्ने आशा गर्न सँगै जान्छ।
विकास समयमा विश्वस्त महसुस गर्न सक्छन् चालक र यात्रु लागि क्रममा जो बीच tread सतह को एक विशेष रुप हो, विभिन्न नवीन समाधान गर्भधारण थिए। उहाँले एक ठूलो संख्या प्राप्त निर्मित Z आकारको slats, फैलाउन यो सतह मार्फत एक अस्तव्यस्त तरिका, पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा। तथापि, वास्तविकता मा उनि स्पष्ट प्रबन्ध छन् र यसको स्थान विश्वसनीय प्रणोदन र कर्षण बाटोमा स्थिति आधार मा उचित गति मोड मा ड्राइभिङ केवल सुरु मा, तर पनि बेला विशेषताहरु, प्रदान गर्नुहोस्।
आंकडा tread Amtel Nordmaster symmetrical। यसको केन्द्र मा किनाराको मा सानो slats धेरै संग दुई axial लगातार रेखाहरू छन्। आफ्नो चुनौती विनिमय दर स्थिरता कायम र skidding को खतरा बिना स्थिर र चिल्लो maneuvering सुनिश्चित छ। यी सबै तत्वहरू साथै, यो एक गुणवत्ता आश्वासन oshipovka रबर थप्छ।
बरफ मा युग्मन प्रदान ढाड को उपस्थिति,
को रक्षक हिउँ छोपेको सतहहरु वा पग्लदै गरेको हिउ मा राम्रो पकड बनाउन इरादा छ भने, बरफ मा ठोस कार्य अन्य तत्व मा आ - पिन। यो मोडेल मा, आफ्नो व्यवस्था तिनीहरूलाई बरफ सतह संग सुरक्षित पकड बनाउन एउटा सानो रकम दिंदा लगभग एक दर्पण छ सम्भव लाग्यो छ। तिनीहरू केवल कहाँ यो सबै को लागि सजिलो बनाउन एक स्थानमा राखिएको भन्ठान्छन् छैन। वास्तवमा, thorns प्रत्येक जो मात्र होइन प्रवेग र आन्दोलन, समयमा तर पनि आफ्नो संभावना आपतकालीन को मामला मा चाँडै प्रतिक्रिया गर्न बढ्छ जो आपतकालीन ब्रेक लगान, मा पकड बढ्ने दस अलग विमानहरु, निर्मित छन्। Amtel मा Nordmaster ST स्पाइक मानक रूप प्रयोग, तर यसलाई सजिलै कुनै पनि सेवा टायर मा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ हानि को मामला मा।
रबर वेयर प्रतिरोध
प्रश्न स्थायित्व विकासकर्ताहरूले पनि बचाउनुभयो छैन। जीवन घर्षण प्रतिरोध वृद्धि गर्न धेरै विधिहरू प्रयोग व्यवस्थित टायर सुधार।
पहिलो - रबर संरचना मा एक विशेष कार्बन अतिरिक्त। यसलाई कम विभिन्न punctures कटौती गर्न उजागर छ भनेर तिनीहरूले, आफ्नो शक्ति सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी धेरै लामो सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यी additives रबर को घनत्व वृद्धि र यो पनि अपेक्षाकृत उच्च तापमान र सुक्खा डामर मा एक शुद्ध आन्दोलन मा तेजी फीका गर्न अनुमति छैन।
प्रतिरोध लगाउने बढाउँछ दोस्रो पक्ष - डबल-पत्र tread को प्रयोग हो। यो काम सतह एक कठिन, तर supple रबर, उनको prematurely बन्द लगाउन दिनुहुन्छ जो बनेको छ। तर, rigidity बावजुद कारण टायर चिप्लो सतहहरु वा हिउँ मा स्थिरता आदर यसको उत्कृष्ट विशेषताहरु गुमाउनु छैन को दोस्रो पत्र को गतिशीलता, र यो समीक्षा द्वारा पुष्टि हुन्छ। Amtel Nordmaster, हामी देख्नेछौं रूपमा, एकदम सफल मोडेल थियो।
कार्बन र एसिड आसंजन स्तरवृद्धि गर्ने घटक रूपमा
माथिको घटक प्रदान रबर को उच्च वेयर प्रतिरोध, र एक सुखद सम्पत्ति पक्ष छन्। हुनत, यो मामला मा, तिनीहरूले एक सम्पूर्ण रूपमा टायर को विशेषताहरु मा दुवै धेरै सकारात्मक प्रभाव हो किनभने सम्पत्ति को प्रकारको, एक byproduct छ के भन्न पनि गाह्रो। यो चासो कि रबर मा Amtel Nordmaster ST प्रयोग छ कार्बन कालो र एक सिलिकन oxidizing एजेन्ट सवारी चलाउँदा मात्र सबैभन्दा सिलिका को बल विश्वास सुधार गर्न सक्दैन, तर पनि सडक सतह संग परिस्कृत सम्पर्क प्रदान, कि बांध्नु त, र यो संग, वृद्धि।
चालक देखि सकारात्मक प्रतिक्रिया
आकलन गर्न परीक्षण र आवेदन विक्रेताहरु को परिणाम साँचो कि, तपाईं पहिले नै केही समय को लागि टायर आनन्द उठाइरहेका छौं जो वास्तविक चालक देखि Amtel Nordmaster समीक्षा अन्वेषण गर्न सक्छ। , सकारात्मक पक्षहरू विचार, सुरु गर्न आफ्नो समीक्षा तिनीहरूलाई चिनो लगाइएको:
विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जो मुख्य फाइदा, सायद, प्रतियोगिहरु संग तुलना मा कम लागत छ। अक्सर कम मूल्य मा, तपाईं एक फोहोर चाल आशा गर्न सक्छौं, तर यहाँ किनभने, तपाईं टाढा देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, रबर बाहिर आश्चर्यजनक राम्रो हुन गरिएका, छैन।
को काम सतह र sidewalls को स्थायित्व। जाडो - यो वर्ष एक यस्तो समय धेरै खतरहरुको बरफ अन्तर्गत लुकेको गर्दा हुन सक्छ, र बरफ गठन-अप को BREAKAWAY टुक्रा र लगभग धोखेबाज ग्लास वा नङ भन्दा हुन छ। तर, जबकि धेरै चालक उच्च बल भन्न र टायर Amtel Nordmaster सीएल प्रतिरोध, साथै सडक मा सामना विभिन्न समस्या सामना गर्न, र उत्पादन क्षति जोगिन आफ्नो क्षमता लगाउने।
बलियो spikes। spiked मोडेल को एक ठूलो संख्या को समस्या spikes को तीव्र हानि छ। तपाईंले सही रन-खर्च को टायर, त्यसपछि यो समस्या पनि ड्राइभिङ को एक अपेक्षाकृत आक्रामक शैली संग, सामना गर्न हुनेछ छैन। यदि
उच्च पार। विकासकर्ता जानिजानि किनभने यो सबै टायर पनि गहिरो नरम हिउँ वा बरफ दर्पण चिल्लो मा विश्वास गर्दै छन् कारण जो सकारात्मक परिणाम, yielded छ, tread डिजाइन र spikes को नियुक्ति मा काम गरे।
यी मुख्य लाभ हो, र यो टायर राम्रो उच्च गुणवत्ता बाहिर गरिएका र निर्माता यसको प्रतिज्ञा राखिएको छ कि स्पष्ट पहिले देखि नै छ। तर, यो मोडेल केही कमियां छ।
विपक्ष प्रयोगकर्ता चिन्ह लगाइएको
सायद, यो खण्ड एकदम सानो हुनेछ। पहिलो drawback - यो विशेष गरी जब शुद्ध डामर ड्राइभिङ, एक उच्च हल्ला स्तर छ। तर, यो बिन्दु तिनीहरूले हल्ला स्रोत हो, किनभने जो मा त्यहाँ spikes छन् सबै बसें, गर्न सामान्य छ, र यो अन्य समीक्षा द्वारा पुष्टि हुन्छ। यस मामला मा Amtel Nordmaster बस छैन एक अपवाद छ।
दोस्रो बेफाइदा - उच्च गति मा विशेषताहरु को गिरावट। तर त्यहाँ जोड गर्न सकिन्छ। प्रायजसो मा, जाडो समयमा, यो उचित हुनुपर्छ र अधिकतम गति संग जान, वा यसलाई अधिक, र वास्तविक यातायात अवस्था आधारमा नेभिगेट गर्नुहोस्।
बाँकी, थप एक निश्चित माइनस भन्दा याद छैन। धेरै चालक ढाड को तीव्र हानि उल्लेख, तर, त्यसको विपरीत, सूचनाहरू तिनीहरूलाई दृढ संलग्न गर्नेहरूलाई को पृष्ठभूमिमा ती पर्याप्त छैन। त्यसैले, यो अवस्था कमजोर गुणस्तर ब्याच वा, या त बढी सम्भावना कारण हुन सक्छ, अनुचित ब्रेक-मा को नतिजा।
रूसी मूल भइरहेको यो रबर, फरक गंभीर जाडो अवस्था लागि उपयुक्त छ र जब जाडो सडक ड्राइभिङ सामना कठिनाइको अधिकांश सामना गर्न सक्षम छ। टायर Amtel Nordmaster2वस्तुतः कुनै बेफाइदा, र सबै भन्दा चालकहरुको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। केवल कार को soundproofing को माध्यम द्वारा या त हुन सक्छ हल्ला जोगिन, वा तथाकथित Velcro खरिद गर्दा, स्टड संग सुसज्जित छैन।
शेवरलेट Lacetti hatchback - विनिर्देशों र समीक्षा
हाम्रो जीवन मा कार
राम्रो हरर: सूची। संसारको सबै भन्दा राम्रो हरर चलचित्रहरू
पनीर बन्स। लागि नुस्खा
Multivarka मा पन्नी मा माछा - व्यञ्जनहरु
मासुको चोक्टा चिकन स्तन
Zucchini संग टर्की cutlets। व्यञ्जनहरु
आर्मेनियाली नाक। किन आर्मेनियालीहरूको ठूलो noses?
रातमा कसले काम गर्दछ। रातको काम कहाँ छ